အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ် လိုက်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် – XB Media Myanmar
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ် လိုက်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် We Love Group တွေအပြင် We Love Page တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မ င်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးမီက ရုံတင်ခဲ့တဲ့ “မြက်နု ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ နေတိုးနဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အပျိုပေါ က်လေးအသွင်ကတော့ ကြည့်ရှူပြီးသူတိုင်း မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်အောင်ပါပဲနော်။
နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု (၂)ဆုကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ထိပ်တန်းဝါရင့်မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီးကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အပီပြင်ဆုံးသရုပ် ဆော င်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။
ယခု (၂၀၂၀) ခုနှစ် အတွက် ပရိသတ်တွေ ခန့်မှန်းကြတဲ့ အကယ်ဒမီ ဆန်ကာတင်စာရင်း ထဲမှာ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေတာပါ။ ရွှေကစ်လေးရဲ့ လတ်တလော ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားစေခဲ့တဲ့ အရာလေးကတော့ အဆိုတော် Ar-T ရဲ့ “ နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်း mtv လေးမှာ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း “ ကိုယ်ဘယ်လောက်သူ့ကို ပျော်စေချင်လဲ ဆိုတာလည်းအချစ်ပါပဲ ။ ဟုတ်လား ပရိတ်သတ်ကြီး ?? နည်းနည်းမွှေမယ်နော် “ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ ခရီး သွားအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်ထိ Singleအဖြစ်နဲ့အနုပညာအလုပ်တွေက်ုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ ရွှေကစ်တစ် ယောက် ချစ်တဲ့သူရှိနေပြီလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကမေးခွန်းထုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ရွှေကစ်တစ်ယောက်ချစ်တဲ့သူရှိနေပြီလားဆို တာထင်မြင်ချက်လေးပေး ခဲ့ပါဦးနော်။
Source : WuttHmone Shwe Yi,CRD – CeleConnections
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဝတ္မွုံေရႊရည္ကေတာ့ အမာခံပရိသတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲဆိုရင္ We Love Group ေတြအျပင္ We Love Page ေတြပါ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္မ င္းသမီး တစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မၾကာေသးမီက ႐ုံတင္ခဲ့တဲ့ “ျမက္ႏု ” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး မွာ ေနတိုးနဲ႔ တြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အပ်ိဳေပါ က္ေလးအသြင္ကေ တာ့ ၾကည့္ရွူၿပီးသူတိုင္း မခ်ီးက်ဴးဘဲမေနနိုင္ေအာင္ပါပဲေနာ္။
နိုင္ငံေက်ာ္ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု (၂)ဆုကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ထိပ္တန္းဝါရင့္မင္းသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးက်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို အပီျပင္ဆုံးသ႐ုပ္ ေဆာ င္နိုင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါပဲေနာ္။
ယခု (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ အတြက္ ပရိသတ္ေတြ ခန႔္မွန္းၾကတဲ့ အကယ္ဒမီ ဆန္ကာတင္စာရင္း ထဲမွာ ဝတ္မွုံေရႊရည္ကေတာ့ ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္ေနတာပါ။ ေရႊကစ္ေလးရဲ့ လတ္တေလာ ပရိ သတ္ေတြပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားေစခဲ့တဲ့ အရာေလးကေတာ့ အဆိုေတာ္ Ar-T ရဲ့ “ နင္ငါ့ကို မခ်စ္ဘူး ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္း mtv ေလးမွာ အမိုက္စားသ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာ င့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာလည္း “ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္သူ႔ကို ေပ်ာ္ေစခ်င္လဲ ဆိုတာလည္းအခ်စ္ပါပဲ ။ ဟုတ္ လား ပရိတ္သတ္ႀကီး ?? နည္းနည္းေမႊမယ္ေနာ္ “ ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ သူမရဲ့ ခရီး သြားအမွတ္တရပုံရိပ္ေတြကို ေဝမၽွလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုခ်ိန္ထိ Singleအျဖစ္နဲ႔အႏုပညာအလုပ္ေတြက္ုလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ေရႊကစ္တစ္ ေယာက္ ခ်စ္တဲ့သူရွိေနၿပီလားဆိုၿပီး ပရိသတ္ေတြကေမးခြန္းထုတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀ ကီးေ ရာ ေရႊကစ္တစ္ေယာက္ခ်စ္တဲ့သူရွိေနၿပီလားဆို တာထင္ျမင္ခ်က္ေလးေပး ခဲ့ပါဦးေနာ္။
ပရိသတ်တွေကို လက်ဆောင်တွေအ မြဲမပေးဖို့ တောင်ဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေ ပိုးအိမ်
အဖေ့ခြေရာနင်းဖို့ ရုပ်ရှင်လောက ထဲကို ဝင်လာတာပါဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီ လွင်မိုး